Wasiirka arrimaha Gudaha ugu baaqay Hay'adaha, Ganacstada iyo shirkadaha hubeysan inay isku soo diiwaan geliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan
Wasiirka arrimaha Gudaha ugu baaqay Hay'adaha, Ganacstada iyo shirkadaha hubeysan inay isku soo diiwaan geliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dowladda KMG ah C/samad Macalin maxamuud ayaa ugu baaqay Hay'adaha, Ganacstada iyo shirkadaha hubeysan inay isku soo diiwaan geliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Waxaa uu sheegay wasiirka inay socdaan howgalo lagu xaqiijinayo amaanka caasimada kaasoo uu tilmaamay inuu saameyn ku yeelandoono hay'adaha, NGO-yada shirkadaha iyo Shaqsiyaadka hubka shaarci darada ah ku dhaxwata Muqdisho hadii aysan iska soo diiwaan gelin hay'adaha amaanka.
Wasiirka ayaa dhinaca kale ka hadlay wada shaqeynta ka dhaxeysa hey'adaha amaanka, isagoo xusay in meesha ay ka baxday tuhunkii dadka ay qabeen ee ahaa in wada shaqeyn toos ah aanay ka dhaxeyn ciidamada dowlada.
Dowladda KMG ah ayaa marar badan digniin u jeedisay dadka sida sharci darada ah hubka ugu dhaxwata magaalada Muqdisho, mana jirto cid u hogaansantay digniintaasi.